Jery todika taona 2015 : mitohy ny fifandroritana politika amin’izay mitranga rehetra | NewsMada
Hivaha tanteraka amin’izay ve ny disadisa politika amin’ity taona ity? Mitohy ny fifandroritana politika amin’izay mitranga rehetra, raha ny tamin’ny taon-dasa. Jery todika…
Lasa adihevitra be ny amin’ny tsy fanajan’ny filohan’ny Repoblika ny fametrahana ny Fitsarana avo na ny Haute cour de justice (HCJ), ara-potoana: herintaona aorian’ny nandraisany fahefana farafahelany, araka ny And. 167 amin’ny lalàmpanorenana. Saika samy nanana ny filazany indray ny mpahay lalàna sasany.
Nambaran’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, teny Ambohidahy, ny 9 febroary, fa sarotra ary mila fandinihana lalina ny fitorian’ny Mapar momba ny fanendrena ny praiminisitra hoe tsy araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana.
Nambaran’ny HCC fa ara-dalàna ny fanendrena praiminisitra
Nisy ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimierampirenena, ny 10-12 febroary, nanoloran’ny praiminisitra ny fandaharanasany ho fanatanterahany ny politikam-panjakana ankapobeny (PGE), araka ny And. 79 ao amin’ny lalàmpanorenana. Saingy nitaky ny fahazoana fiara 4 x 4 ny depiote.
Tsy vitan’izany, miandry ny valin’ny fitoriany teny amin’ny HCC ny Mapar. Tsy vita ny 11 febroary ny fanoloran’ny praiminisitra ny PGE. Navoakan’ny HCC ny didim-pitsarana ny maha ara-dalàna ny fanendrena praiminisitra, na nambarany aza ny 9 febroary fa sarotra sy mila dinihina lalina ny fitorian’ny Mapar.
Miroso amin’ny asany ny governemanta vaovao
Nilaza ny praiminisitra Ravelonarivo fa hodinihina ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana ho an’ireo depiote. “Roso ’ty ka tsa mipody koa”, hoy izy nanolotra ny fandaharanasany, mifantoka amin’ny lohahevitra valo, ny 12 febroary. Fototr’izany ny fitondrana tsara tantana ho fanalahidin’ny fahombiazana.
Eo, ohatra, ny fanamboaran-dalana: RN44, RN4, RN5…; ny fanamboarana foibe mpamokatra herinaratra amin’ny rano, azo ampiasaina ato anatin’ny roa taona: Farahantsana Sahalanona, Anjialava, Ampitabepoaka; ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra goavana: Mahavola (300 MW), Sahofika (105MW).
Eo amin’ny lafiny sosialy, haorina sy hampitaovana ny efitrano fianarana 3 000, horaisina ny mpampianatra 8 000… Hosakafana ireo Centre de santé de base (CSB) nikatona, harenina ny 43, hasiana mpiasan’ny fahasalamana ny CSB 48… Ny toky, fitaka; fa ny atao no hita, araka ny filazany.
Une réponse à "Jery todika taona 2015 : mitohy ny fifandroritana politika amin’izay mitranga rehetra "
Dylan Delavigne 05/01/2016 à 10:45